Ny streaming dia nanjary fomba malaza indrindra handaniana ny atiny ankehitriny. Mihaino mozika, milalao lalao na mijery andian-tantara na sarimihetsika. Izany no antony ananantsika sokajy iray manontolo natokana ho an'ny vaovao rehetra momba ny streaming amin'ny Android. Aza adino amin'izay ny vaovao tonga amin'ity faritra ity.
Fampiharana, tolo-kevitra, vaovao na fika hanarahana ny streaming. Na mitady hihaino mozika ianao, milalao lalao na mijery karazana atiny rehetra amin'ny telefaona Android anao, dia azonao atao ny mahita ny zavatra rehetra mifandraika amin'ny streaming amin'ity fizarana ity.
Inona ny fahitalavitra Rakuten, ohatrinona ny vidiny ary fantsona firy no arosony ho antsika?
Rakuten dia teraka tamin'ny sehatry ny horonantsary mivantana amin'ny fangatahana, ahafahanay manofa sy mividy sarimihetsika, indrindra ...
Ahoana ny fomba hahazoana an'i Netflix tsy manana carte de crédit
Netflix dia teraka ho toy ny fivarotana horonantsary izay nandefa an-trano. Rehefa nivoatra ny Internet, nanjary sehatra ...
Spotify dia nanambara ny fanavaozana ny rindrambaiko birao miaraka amina endrika vaovao sy andianà vaovao ...
Star, kinova olon-dehibe an'ny Disney +, azo alaina any Espana ankehitriny
Hatramin'ny nanombohan'ny Disney + tamin'ny Novambra 2019 tany Etazonia, ny atiny azo jerena amin'ity sehatra ity dia ...
Spotify dia nanambara ny kinova HiFi farany tsy nisy fatiantoka kalitao
Spotify no serivisy mozika mivantana nandefa tsena, ary toy ny WhatsApp, nahomby ary ...
Ny serivisy fandefasana horonantsary an'i Apple dia mifanaraka amin'ny Google TV izao
Miaraka amin'ny fiakaran'ny serivisy fandefasana horonantsary, tonga ny fotoana tsy maintsy ...
Disney + dia mahatratra 95 tapitrisa ny mpanjifa manerantany
Talohan'ny nanombohany tany Amerika Latina, ny serivisy horonan-tsarimihetsika Disney, Disney +, dia nanana mpanjifa 73 tapitrisa,…
Spotify eo an-tampon'ny fahazoana mpampiasa 350 tapitrisa isam-bolana
Spotify no hany sehatra mozika mivantana izay manome antsika fidirana amin'ny katalaogna iray manontolo amin'ny alàlan'ny ...
Spotify dia nampiakatra ny vidin'ny drafitry ny fianakaviana amin'ny euro iray
Ny serivisy fandefasana mozika, toy ny tolotra horonan-tsary, dia niditra tamin'ny fiainantsika sy ny maro ...